Ithuluzi lokuphanda linokukunceda njani ukulawula i-Amazon market?
Ukuba uphupha ukuba ngumthengisi we-intanethi okanye unokwenza kwakho omncinci kwaye ukhangela iimarike zemveliso yakho, i-Amazon.com iza kuzisa zonke iinjongo zakho. Eli qonga lihluke ngokugqibeleleyo kubathengisi be-intanethi nabasandul Awudingi utyalo-mali obalulekileyo ukuqala ishishini lakho kwi-Amazon. Yonke into oyifunayo yindlela ehlakaniphile, umonde, kunye nobuchule obuninzi bokuphucula.
Kulesi nqaku siza kuthetha indlela yokuchonga amanqaku akho omncintiswano weemarike eziphezulu kunye nokulandelela izithuba zabo zesikhundla; indlela yokubonakalisa i-niche efanelekileyo yeemakethe ukuthengisa kuyo; khetha ukuwina ama-magnets okhokelo kwi-funnel yakho yokumaketha, kwaye ekugqibeleni, fumana indawo yexabiso lokukhuphisana ngezinto zakho.
Ngaphambi kokuba siqhubekele kule ndlela yokucwangcisa ama-Amazon, kubalulekile ukuthetha ukuba i-Amazon yinkqubo evulekileyo ngakumbi kune-f.e. Uphando. Ikwabelana ngemali kwiiyiphi iikhampani ii-Amazon ezithengisa ngakumbi kunye naziphi na iimarike. Ungaqwalasela le nkcukacha kwiCandelo le-Amazon Best Seller. Apha ungayifumana uluhlu olupheleleyo lwe-Amazon abathengisa kakhulu kwi-niche nganye yeemarike, zeziphi izinto eziphathekayo ngabathengisi bama-Amazon, kwaye yiziphi izinto ezithengisa kakhulu. Ezi nkcukacha ezibalulekileyo ziya kukunceda ukwakha iphulo lokuphucula i-Amazon kunye namacebiso ethu aluncedo. Ngoko makhe singene kuwo.
Indlela yokuchonga intengiso yeyona nto okanye i-niche?
Sebenzisa i-Amazon njengethuluzi lakho lophando lweemakethe njengoko lingakunika idatha echanekileyo. Yonke into oyifunayo ukujonga ama-Amazon athengisa kakhulu abathengisi kwaye unqume ukuba yeyiphi i-niche inokukwazi ukufezekisa ngokufanelekileyo iimfuno zakho zoshishino. Ulwazi olugqithiseleyo lokuthengisa lunokukunceda ukwazi ukuba zeziphi iimveliso ezinokubhenela kwikharityhulam yakho ekujoliswe kuyo kunye nokuzisa isixa esikhulu sekhokeli.
Ukulandela iphepha lomkhiqizo, unokufumanisa apho lihamba khona malunga nokuthengiswa kweminye imikhiqizo ye-Amazon.
Udinga ukuhlawula ingqalelo ngokukodwa kwiindidi zamacandelo kwicala lasekhohlo. Ezi ziqendu ziyakunika ukuqonda ngokucacileyo imeko yangoku yemarike. Apha ungayifumana i-sub-niches enokuyicinga ukuba unciphise i-market target.
Kungenzeka ukuba akukho zigaba ezingaphantsi ongayisebenzisa. Kuxhomekeke kwi-niche yakho yemveliso yocwaningo. Nangona kunjalo, iindidi ezinxulumene nazo zingakwazi ukunika ulwazi oluninzi lolwazi lokhuphiswano olunjengokunikezwa okunokwenzeka, iimotethi ezihamba phambili, upsells, downsells, njalo njalo.
Ukuchonga i-TOP ye-market ye-niche iqhankqalaza kwaye uzuze oko bakwenzayo
I-iTunes iyona nto ithengisa ukufumana ukhuphiswano oluphambili ngaphakathi i-niche yakho yemarike kwaye ufunde ngubani othe wayithengisa kakhulu. Ukuze ufumane olu lwazi, ungaya kwi-Google kwaye uhlolisise ngamaphepha akho webhsayithi omncintiswano kunye neminye iminikelo yemveliso kwindawo yakho yemarike.
Enye indlela yokujonga abakhuphiswano bakho kukuthenga enye yezinto zabo kwaye ukhangele oko bakwenzayo emva kokuthengisa. Ngaba basebenzisa ezo nkonzo njenge "Feedback Genius" okanye enye ukuvelisa izinto ezintle ezisekelwe kumaphepha abo? Ngaphezu koko, unokwazi ukuba ii-imeyili zazo emva kwee-imeyili ziqulethe izinto zokuthengisa ezongezelelweyo okanye cha. Ukuba ufumana ezinye iimpahla zokuthengisa, zingaba zincinci kunezinto oza kuzibona ukuba uthenge loo mveliso kwi-Amazon.
Ngoko, unokufunda ezininzi ezibalulekileyo kwiinkcukacha zakho zezoshishino nje ngokuthenga iimveliso zazo kunye nokuhamba kwemali yokuthengisa Source .